အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန့်ပွားမှာကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန့်ပွားမှာကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း
အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန့်ပွားမှာကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်း
Posted by ရဲမာန်ဝင်း on Oct 11, 2012 in Contributors, Myanma News, News | 21 comments
X ဖတ်မိခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးလေး ဖတ်မိခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးလေး
အစ္စလာမ်သာသနာ ပြန့်ပွားမှာကို ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်တဲ့ အာဏာရှင် ဦးနေ၀င်းကြီးဟာ အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တို့ကို နိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား အခွင့်အရေး မရနိုင်ဘို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ၁၉၈၂ ခုနှစ် လူဝင်မှု ဥပေဒကို တစ် ကိုယ်တော် အမိန့်အာဏာနဲ့ ပြဌာန်း ခဲ့ပါတယ်။
ဥပဒေ တစ်ရပ်ကို ပြဌာန်းလို့ အဲ့ဒီ ဥပဒေဟာ နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးမှာ ရှိတဲ့ လူသားအားလုံးအပေါ်မှာ
တန်းတူ ညီမျှ သက်ရောက်မှု ရှိရင်- မြန်မာမွတ်ဆလင်များ အနေနဲ့ သဘောမတူညီစရာ အကြောင်းမရှိပါ။မြန်မာနိုင်ငံထဲကို အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီခေတ်ကမှ ၀င်လာခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယမျိုးနွယ် သို့မဟုတ် အိန္ဒိယ ကပြား မွတ်ဆလင် များ အနေနဲ့လည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဥပဒေတစ်ရပ် ဖြစ်လို့ အပြစ်ဆိုနေစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်- အဲ့ဒီ ဥပဒေဟာ မွတ်ဆလင်မှအပ အခြား ဘယ်လူမျိုးကိုမှ မသက်ရောက်တဲ့ အပြင်- မွတ်ဆလင် မှန်ရင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုရင်မင်းအဆက်ဆက် နေထိုင်ခစားခဲ့သူ များကိုပင်- စီစစ်မှု မရှိဘဲ ၁၈၂၄ နောက်ပိုင်းမှ ၀င်လာသူများ အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ် အတိုက်အခံလို့ ယူဆထားတဲ့ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ- ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့ ခရစ်ယာန်များ ကလည်း မွတ်ဆလင်ကို အနှိမ်ခံ လူမျိုးအဖြစ် ခွဲခြား သတ်မှတ်ပစ်လိုက်တာကို နှလုံးတွေ့ လိုလားခဲ့ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် မွတ်ဆလင် လူများစု နေထိုင်ရာ ရခိုင်ဒေသမှာ ဥပဒေဟာ လုံးဝ တစ်ဘက်စောင်းနင်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ရခိုင်မျိုးနွယ် မွတ်ဆလင်များ၊ ကမန်များ- ကိုပင် လုံးဝ နိုင်ငံခြားသား ကုလား အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စာရင်းမှာ ဘယ်လို ဖေါ်ပြဖေါ်ပြ- စာရွက်ပေါ်မှာသာ ဖေါ်ပြထားပြီး- ပြုမူဆက်ဆံရေးမှာ လုံးဝ တစ်ဘက်စောင်းနင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိ မြင်နေတဲ့ ကိစ္စရပ်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမန်လူမျိုးစုကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ်ဖေါ်ပြပေမယ့်- ကမန်ကိုလည်း ကုလားလို့ သတ်မှတ် ထားခဲ့တယ်။ သံတွဲမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးစု မွတ်ဆလင်များကိုလည်း အတင်းအဓမ္မ- ကမန် အဖြစ်ခံယူစေခဲ့တယ်။ ရခိုင်လူ မျိုးမှာ အစ္စလာမ် သာသနာဝင် ဆိုတာ မရှိဘူး- ဒါကြောင့် မွတ်ဆလင်မှန်ရင် ဘင်္ဂလီဟုတ်ရင်ဟုတ်၊ မဟုတ်ရင် ကမန် ဖြစ်စေရ မယ်လို့ အတင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ရခိုင်မွတ်ဆလင်ဟာ ကမန် မဟုတ်သလို၊ ရိုဟင်ဂျာဟာလည်း ဘင်္ဂလီ မဟုတ်ပါ။ ဒါကို လည်း နားပင်းချင်ဟန်၊ မျက်လုံးကန်းချင်ဟန် ဆောင်နေဆဲပါ။
ဥပဒေဟာ တစ်ကယ်မျှတတယ် ဆိုရင်၊ ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ၀င်လာတဲ့ ဘင်္ဂလီ ဗုဒ္ဓဘာသာ အ၀ကျွန်းသား များနဲ့ အနောက်သားများ ကိစ္စကိုလည်း တိတိကျကျ ဆောင်ရွက်ရပါမယ်။- ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး (ရမ်းဗြဲ ရဲ့ မြောက်ပိုင်းဒေသ တစ်ခုလုံး)မှာ ရှိတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးခံယူထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာများရဲ့ ၇၅ ရာနှုန်းဟာလည်း- ရခိုင်ကို အင်္ဂလိပ် သိမ်း ပြီး ၁၈၂၄ နောက်ပိုင်းမှ ဘင်္ဂလားပြည်က ခေါ်လာတဲ့ အစားထိုး ရခိုင်များ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုလည်း တိတိကျကျ ဖေါ်ထုတ်ရပါ မယ်။
ရခိုင်ဒေသကို ဗမာဘုရင် ဘိုးတော်မောင်းဝိုင်း သိမ်းပိုက်တော့- ဗမာတပ်မတော်ဟာ ရခိုင်လူမျိုးများကို မျိုးပြုတ် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါကို ရခိုင် ရာဇ၀င်သစ်ကျမ်းမှာ-
ရခိုင်ပြည် ကျွန်သက် အနှစ် (၂၂၇) နှစ် ကြာသောအခါ မြန်မာကျူးကျော်စစ်ကို (၄၅) ရက်ကြာကြာ ခုခံတိုက်ခိုက်ပြီးနောက် (၁၇၈၄) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်ကြီးနှင့်တကွ ရုပ်ရှင်တော် မဟာမြတ်မုနီ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်။ မြန်မာများသည် ရခိုင့်ရွှေနန်းတော်၊ ပိဋကတ်တိုက်တော်၊ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း အကြီး (၃၀)၊ အငယ် (၃၀၀၀) ကျော်ကို မီးလျှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ရခိုင်တပြည်လုံး ဖူးဖူးရောင်သော လူသေကောင်များဖြင့် ပြန့်ကြဲလျှက်ရှိခဲ့သည်။ အသတ်ခံခဲ့ရသော ရခိုင်သားများကို “တင်းဝပန်းခိုင်၊ တမြိုင်မြိုင်၊ ရခိုင်လူအလောင်း” ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။ ဂဏန်းသင်္ချာအလို (၇) သန်းကျော်သည်။ မြန်မာများ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်ကို အစွဲပြု၍ ဂေါင်းပုံပြင် (မြောက်ဦး)၊ လူသတ်ဂျိုင် (မြောက်ဦး)၊ ရေတက် ရေကျသောအခါ သောင်ပြင်တွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ချည်းနှောင်၍ သတ်ခဲ့သောကြောင့် ရေအကျတွင် ဖြူနီသော အလောင်း ကောင်များကို မြင်ရသောကြောင့် ပေါက်ဖဲ့ရွာ (မန်အောင်၊) လက်များကို ဖြတ်၍ တောင်နှယ်ပုံထား သောကြောင့် လက်ပုံတောင် (မာန်အောင်)၊ ရေကန်တွင် လူအပြည့်သတ်၍ ပုံထားသောကြောင့် သီဘေးကန် (သေဘေးကန်) (ပေါက်တော)၊ ကလေးငယ်များကို ရေကျရေတက်ချိန်တွင် ခြံလှောင်၍သတ်ခဲ့သောကြောင့် ခြံလှောင်ချောင်း (မာန်အောင်)၊ ခြံပြင် (မောင် တော)၊ သွေးချောင်း (တောင်ကုတ်)၊ လူ့အသားတစ်များကို ခုတ်ဖြတ်၍ပုံထားသောကြောင့် အသားပုံရွာ (ပုဏ္ဏားကျွန်း) စသည့်စသည့်ဖြင့် နာမည်တွင်ခဲ့သည်။
နှစ်ပေါင်း (၄၀) လုံးလုံး ရခိုင်မျိုးတုံးအောင် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ မာန်အောင်မြို့ တမြို့တည်းတွင် အသတ်ခံခဲ့ ရသည်ကို မှတ် တမ်းတင်ထားသည်မှာ “လူငယ်တသောင်း၊ လူကြီးပေါင်းမူ၊ သျှစ်သောင်းအစွန်း၊ တသိန်းမှန်း၏၊ မယွန်းထိုခါ၊ သီကုန်ပါ၏၊ သိမ်းကာယူက၊ ပြည်အင်းဝသို့၊ ပါရလီငြား၊ လူယောက်ျားနှင့်၊ မပြားမှန်ထ၊ လူမိန်း မကို၊ ရွီကြလီသော်၊ နှစ်သိန်းကျော်၏၊ ကြားသော်မြင်ခါ၊ ကြောက်ဖွယ်သာတည်း” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
(၁၈၂၆) ခုနှစ် ဗြိတိသျှလက်အောက် ကျရောက်ရသောအခါ မြန်မာလက်အောက် နှစ် (၄၀) ငရဲစခန်းသည် တခန်းရပ်ခဲ့သည်။ ကျူးကျော်သူမြန်မာများကိုမောင်းထုတ်၍ အင်္ဂလိပ်တို့က တဖန်အုပ်ချုပ်သည်။ သို့သော် အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်၌ လူမကျန်တော့ပေ။ ရခိုင်နိုင်ငံတော်တခုလုံးသည် သုသာန်တစပြင်ပမာ တောကြီးမျက်မဲ ဖြစ်နေလေတော့သည်။ အင်္ဂလိပ် အကာအကွယ်ကြောင့် သေကံမရောက်သတ်မပျောက်ပဲ ရခိုင်တချို့ ဘင်္ဂလားနယ်တွင် ကျန်ရစ်သည်။ ထိုသူများ ထဲမှ (၅) သောင်းခန်ကို ပြန်ခေါ်ယူ၍ ရခိုင်ပြည်၌ ပြန်လည်နေရာချထားပေးခဲ့သည်။
ထိုမျိုးပြုတ် သတ်ပွဲကြီး အကြောင်းကို ၁၈၂၄ ခု ဗမာများ ရခိုင်ကို သိမ်းပြီး ရခိုင်မှ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး ရာမူး (ပန်းဝါ)၌ ရဲအရာရှိ အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့ သော ဟိန္ဒူဘာသာဝင် Puran Bisungri ကလည်းမှတ်တမ်း တင်ထား ကြောင်း ရခိုင်သမိုင်းပညာရှင် ချမ်းအေး ကိုယ်တိုင်က ၀န်ခံထားပါတယ်။
ဖေါ်ပြပါ သမိုင်းဟာ ရိုဟင်ဂျာများက ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများ အပေါ်မနာလို မုန်းတီးပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ သမိုင်း မဟုတ်ပါ။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများကိုယ်တိုင် ပြုစုတင်ပြထားတဲ့ သမိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသမိုင်းအရ- ၁၈၂၄ ခုနှစ်မှာ ရခိုင်ကို အင်္ဂလိပ်က သိမ်းတော့- ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်လူမျိုးဟူ၍ မရှိတော့ပါ။ (ယုတ္တိဗေဒအရ ဆင်ခြင်ရင်တော့ ဗမာစစ်တပ်များ မရောက်နိုင် မပေါက်နိုင်တဲ့ တောကြားတောင်ကြားမှာ အနည်းငယ် ပုန်းကွယ် နေခဲ့နိုင်ပါ တယ်။)- ဒီရခိုင်သမိုင်းအရ- ဗမာတပ်များဟာ ရခိုင်ပြည်ရှိ အခြားသော လူမျိုးများ (မြို၊ ဒိုင်းနက်၊ ကမန်၊ မရ်မာ ကီး၊ ရိုဟင်ဂျာ (ရခိုင်မွတ်ဆလင်)များကို သတ်ခဲ့ကြောင်း နှိပ်ကွပ်မောင်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ ဒါကြောင့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာမှအပ အခြားလူမျိုးများ ရခိုင်ပြည်မှာ မျိုးပြုတ်ခဲ့ခြင်း မရှိဘဲ- ရှိဆဲ ရှိနေခဲ့တဲ့ အဓိပ္ပါယ် ကို ပေးပါတယ်။
မျိုးပြုတ်သွားတဲ့ ရခိုင်လူမျိုးများ နေရာမှာ အင်္ဂလိပ်တို့က ၁၈၂၄ ခု နောက်ပိုင်းမှာ ဘင်္ဂလီဗုဒ္ဓဘာသာများကို ခေါ်ယူ အစားထိုးပြီး- ရခိုင်အတုနဲ့ ရခိုင်ပြည်ကို ထူထောင်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ- ဒီနေ့ ရှိနေတဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာများရဲ့ သမိုင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ – ဒီရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့ လူမျိုးကိုရော ၁၈၂၄ ဥပဒေနဲ့ တစ်ကယ်စီစစ်ပေးဘို့ လိုပါမယ်။
View all posts by ရဲမာန်ဝင်း →
ကဲ..လာပြန်ပြီ နောက်တစ်နည်း…………….ခုနည်းကတော့ ရခိုင်နဲ့မြန်မာကို ရန်တိုက်ပေးတဲ့နည်းသာ
ဆိုလိုတာက ယခုလက်ရှိရခိုင်တွေက ဘင်္ဂလားကရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ဘင်္ဂါလီတွေကတော့ အရင်
အဆက်ဆက်ရခိုင်ပြည်သူ၊ သားတွေလို့ ဆိုလိုတာပေါ့နော်…ဟီဟိ။
အမည် အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတင်နေတာ အားမရသေးဘူးလားကွာ
မူရင်း အမည်မှန်နဲ့ တင်စမ်းပါ
ဘာတွေ ဆက်ပြီး လိမ်အုံးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်နေမယ်နော :cool:
သဂျီးရေ……………………. ဟေ့ာဒီမှာ ဗျို့ …… ကော့မန့် ပိတ်ပါဗျို့ ………. ။ :chee:
မအိတုံ သဂျီးကို သိပ်တမနေနဲ့အုန်း သဂျီးကိုယ်တိုင်က အားပေးထားတာဗျ အနော်တို့ ဘာသာဘက်ကရေးကြည့်ပါလား ချက်ခြင်းဖျက်သွားမှာ
ခင်ဗျားတို့ မလဲ တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒီဆိုဒ်လာပြီး
မွတ်ဆလင် သမိုင်းကို အင်ထု၊ ရခိုင် – ဗမာ လာသွေးခွဲ….
ဒါမှမဟုတ် ထောက်ပန့်ကြေး ရလို့လား?
ဒါဆိုရင်အခုရခိုင်ပြည်နယ်ကြီးဟာ ဘင်္ဂလီတွေနဲ့တည်ထောင်ထားခဲ့ရတာပေါ့နော်….။းဟားဟားဟား။ ဟီးဟီးဟီး…..ဒီဘင်္ဂလီ မြန်မာစာတော်တော်ရေးတတ်ဖတ်တတ်တာဘဲ..။သူတို့တွေမြန်မာစာတတ်ရင် မြန်မာတွေဒုက္ခရောက်ဖို့ရှိတယ်။ ငလိမ်တွေ..။
ခရီးရောက်မဆိုက်လေး ပြောရအုံးမယ်။ အကောင့်အသစ်ပေမယ့် နာနာ(သံတွဲ)တို့လို ပြဿနာ ဖန်တီးမယ့်လူ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် အကြောင်းက နည်းနည်းဖြစ်ပြီး ရခိုင်-ဗမာစစ်ပွဲကို ရေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ရခိုင်လူမျိုးများက အမြန်ဆုံး ကန့်ကွက်ပါ။ ကိုယ့်ဆွေကိုယ်မျိုး တွေရဲ့ကိစ္စမှာ အပြင်က ကုလားဒိန်က ဝင်ပြောခွင့် မရှိပါ။ ဗမာကို ပြောတာပဲဆိုပြီး ပျော်ပြီး ငြိမ်မနေပါနဲ့။ တဘက်က ပြန်ပြောရင် မဆိုင်ပဲနဲ့ နာကုန်ပါလိမ့်မယ်။
အဟမ်းအဟမ်း ဝုတ်ဝုတ် ဂိန်ကိန်ကိန် တိန်!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ဒီလိုလုပ်ပါလား ဒီပိုစ့်ကို မဖျက်ဘဲနဲ့ ကျုပ်တို့တွေ ငစိမ်းသည်တွေ ထမီလှန်ပြီးရန်ဖြစ်ကြသလို
ပါးစပ်ထဲထွက်ရာ ဟုတ်ပါဘူး လက်တည့်ရာကီးဘုတ်မှာရေးဂျရအောင်လား
အကောင်းဖက်ကတွေးရင် ကီးဘုတ်နှိပ်တာလေ့ကျင့်တဲ့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဘဲ
ဗျန်းဗျန်းဗျန်း ဟဲ့ဖေနာနာ#@&% ရဲ့ နင့်#$@%^က ပလွေမှုတ်ခြင်နေလို့လားဟဲ့
ဦးနေဝင်းကြောင့် အနှီးလူတစ်စု မှတ်ပုံတင်ပျောက်ခဲ့တယ်လို့အခိုင်အမာပြောမယ်ဆိုရင်
ဆိုတော့ကာ ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့အုပ်စုနဲ့ မြန်မာပြည်ကြီးကို ချိန်ခွင်ပေါ်တင်ပြီးချိန်ကြည့်ရင်
ခင်ဗျားတို့ ဖြေသာပါတယ် ကွယ်
ခင်ဗျားတို့ အခြားလူတွေဆိုတာအသာထား မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ က ဒီထက် ပိုပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဘဲနော
မြန်မာပြည်သားတွေက ခင်ဗျားတို့ထက် ပိုပြီးရင်နာနေကြပါဒယ် ဒါက တစ်နည်း
ဦးနေဝင်းဆိုတဲ့ သတ္တဝါက တစ်ယောက်တည်းရယ် ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့က အများကြီး
ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တော့ အများကြီးကို တစ်ယောက်ထဲက ဖင်ချသွားတာကို
စောက်ရှက်မရှိ အွန်လိုင်းပေါ်တက်အော်တာကတော့ ဆင်ခြင်ပေါ့
ခင်ဗျား အရှက်မရှိတာက အရေးမကြီးဘူး ကျုပ်လည်းဖင်ကျိန်းဒယ်
ဆိုခဲ့ပြီးသလို အဲ့သည်ဘာဆိုတာကြီးကလည်း သက်ဆိုင်သူတွေအနေနှင့် လူလိုတွေးကြဦး
အဲ့သည်ဘာသာရေးစစ်ပွဲဆိုတာကြီးကို ဆင်နွဲတော့မယ်ဆိုရင် စစ်တိုက်ခိုင်းတဲ့ဘုရား လို့
ကျုပ်ကတော့ ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်တော့မှအယူမသီးဘူးဆိုတာ
ဆိုလိုတာက ဒီလိုပြောလိုက်လို့ ကျုပ်က ဘာသာရေးတိုက်ခိုက်ပြီး ပြောတဲ့သဘောဖြစ်မနေစေဘို့ပါ
ဘိုပု သိပြီးသား အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့
ကမ်ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး ဟိုဟာ က ဟိုဟာမ လို့ ဟိုဒင်း ဟိုထဲမှာ ဟိုလိုလို ဒီလိုလို ဆိုထားတယ် ဆိုလားပဲ
ဟမ်း….. ကျုပ်တို့သူဂျီး လဲရွာဆူမှ သူ့ဩဇာ မြဲတယ်ထင်လားမသိဘူး!
သူ့ ဥပဒေ ၆ နဲ့ ၇ ငြိတာတောင် ဘာမှ မပြောသေးဘူး၊
ရွာထဲဝင်လာတာ စာလေး ဖတ်/ရေး ပြီးကိုယ့်ပီတိနဲ့ကိုယ် နေချင်လို့ပါဗျာ……
သူဂျီးပီပီ စည်းကမ်း ထိမ်းဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပ…..
ဒီလို တနပ်စား အကောင့်တွေကို ခွင့်ပေးရင်ဖြင့်………
ဦးကျောက်တို့ … ဘပုတို့ ပြောသင့်တာတွေ ပြောကုန်ပေမယ့် …တဂျီးကတော့ …. မသိခြင်ထောင်ဆောင်ကောင်းတုန်း … ခွိခွိ ။ :harr:
ဒဂျီးက မဆူ ဆူအောင်လုပ်ပြီး လက်ဘက်ခြောက်ခတ်သောက်မဲ့ သဘောလားမသိဘူး…
ဟင်းနော် ဒဂျီး.. သတိထားမိတာတင် အတော်များနေဘီ…
အခု ဒါလေးလဲ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ ခရီးရောက်မဆိုက် ပြောရအုံးမယ်။ မြန်မာ တယောက်က ကုလားလို့ ရေးလိုက်တာနဲ့ ဒီလိုရေးတာ ဆင်ခြင်ပါကွယ်။ ကုသလ အမျိုးကောင်းသားလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို ဒီလို ကြည့်စေချင်ပါတယ်ဆိုပြီး လင့်ခ်တွေ ပြပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး ဒီပို့စ်ကို ကွန်မန့်ပိတ်ပါမယ်နော။ အဖမြန်မာပြည်ဖို့ပါ ဆိုပြီး အသံကြားရပါလိမ့်မယ်။ ပြောပြန်ရင်လည်း အလွန်ဖြစ်အုံးမယ်။
အခု ကြားပြီးကြပြီလား။ ခုတလော Black Mouslim Brothers အတိုကောက် BMB မြန်မာလို မည်းနက်သော မွတ်ဆလင် ညီနောင်များအသင်းဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်အဖွဲ့ကြီးတခု ပေါ်နေတယ်တဲ့။ အစည်းအဝေးတွေ ဘာတွေလုပ်ရင် ဝတ်ရုံနက်ကြီးတွေခြုံပြီး ခေါင်းစွပ်နက်ကြီးတွေ စွပ်ထားသတဲ့။ ခေါင်းဆောင်လုပ်သူကို အပြင်မှာ ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးဘူးတဲ့။ အင်္ဂလိပ်စကားကို အမေရိကန် accent နဲ့ပြောတတ်တယ်တဲ့။ US မှာနေတဲ့လူဆိုပဲ။ ဟီး ဟီး ခရီးရောက်မဆိုက် တကယ် နောက်တာပါ။
ဘယ်လိုပြောရမလဲ…သူကြီးလည်းလူ ငခူလည်းငါး..ကိုယ်ထုတ်တဲ့စည်းကမ်း..ကိုယ်မနှိုင်…ဟို..ကျောင်းအုပ်ကြီးလိုပေါ့..ဆေးလိပ်မသောက်ရ…သူ့ရုံးခန်းမှာ…ဆိုင်းဘုတ်တင်ထား….သူကတော့..ဆေးပြင်းလိပ်ကြီးမီးခိုးတထောင်းထောင်းထွက်အောင်.ဖွဲါလို့..(မင်းဖက် လှည့်ရေးထားတာလား ငါ့ဖက်လှည့်ရေးထားတာလား…ဖတ်တဲ့သူအပြစ်ပေါ့…..မှုလေးကတော့ ကောင်းပါတယ်..နှစ်၁၀၀၀ သူကြီးရေ…စည်းကမ်းချက် (၆) က ဘယ်ဖက် လှည့်ရေးထားတာလဲဗျ…).
ကျနော့ အမြင်ကတော့ ဒီပို့ကိုဖျက်စရာ မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့….
သမိုင်းအထောက်အထား မခိုင်လုံတဲ့ သမိုင်းလိမ်ဆိုတာသိသာတယ်။ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ပို့ထဲမှာ ပါတဲ့ အချက်တစ်ချက်ခြင်းစီကို မှန် မမှန် ဘယ်လောက်ထိအာမခံနိုင်မလဲဆိုတာ သိချင်တယ်။
ကြားဖူးနားဝ သမိုင်းယောင်ယောင် ရာဇဝင်ယောင်ယောင် ဒဏ္ဍာရီ၊ လူမုန်းများတဲ့ ဦးနေဝင်း အမည်တွေကို သုံးပြီး ကိုလိုရာသမိုင်းဖြစ်အောင်ရေးထားတာ ထင်ရှားပါတယ်။
သူကြီးနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒီဆိုက်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်က အစွန်ရောက် မုန်းတီးမှု မပါရင် မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ လုပ်ကြံဖန်တီးရေးသားခွင့် ရှိပါတယ်။ အနုပညာပြောင်မြောက်ရင် ဆုတောင်ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီပို့ ကောင်းမကောင်း မှန် မမှန် ကတော့ ပို့ရေးသူရဲ့ တာဝန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ကို မကြိုက်ရင် မကြိုက်ကြောင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ဒီပို့ကို မကြိုက်ပါ။ ပို့ရေးသူ ကို အထင်သေးပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ်လက်မခံပါ။
အစ္စလာမ် ဘာသာ ပြန့်ပွားလာမှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။
(၁၇၈၄) ခု ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့တွင် ရခိုင်ပြည်ကြီးနှင့်တကွ ရုပ်ရှင်တော် မဟာမြတ်မုနီ အသိမ်းခံလိုက်ရသည်။ မြန်မာများသည် ရခိုင့်ရွှေနန်းတော်၊ ပိဋကတ်တိုက်တော်၊ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်း အကြီး (၃၀)၊ အငယ် (၃၀၀၀) ကျော်ကို မီးလျှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သည်။ ရခိုင်တပြည်လုံး ဖူးဖူးရောင်သော လူသေကောင်များဖြင့် ပြန့်ကြဲလျှက်ရှိခဲ့သည်။ အသတ်ခံခဲ့ရသော ရခိုင်သားများကို “တင်းဝပန်းခိုင်၊ တမြိုင်မြိုင်၊ ရခိုင်လူအလောင်း” ဟူ၍ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့သည်။ ဂဏန်းသင်္ချာအလို (၇) သန်းကျော်သည်။
မန်းဂေဇက်ကို တကယ်စိတ်ကုန်တယ်.. ဒီလိုစာတွေကိုတင်ခွင့်ပေးထားလို့..
Some of So called rohinjar ( Bangali ) transfer to Myanmar with Myanmar passport go to Malaysia about 90000 people. And they demand as Myanmar political refuges at that countries .And they also go to Thailand and other countries liked that Australia, EU and US.
USA DV lottery ban the Bangaladish since this year. Bangladesh population is about 180 millions.
ပိုစ့်တင်သူ ရဲမာန်ဝင်း ၊ ဤပိုစ့်ဖျက်ခြင်းကွန်မန့်ပိတ်ခြင်းပြုစေလိုသူ ရွာသူားအများ၊
ယခုထိ လက်ပိုင်ကြည့်နေသူ သဂျီး။
မင်းက ကုလားမဟုတ်နိုင်ဘူး ကုလားဒိန်ဖြစ်ရမယ်…။ သဂျီးနဲ့ အမျိုးတော်သလား..။ :saut:
History itself is biased. ဒီအယူအဆကိုလက်ခံနေတဲ့ prestigious ကမ္ဘာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွေက သမိုင်းဘာသာရပ်ကို Critic-based နဲ့ သင်ကြားကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကော်မတီဆိုတာ ရှိခဲ့၊ ရှိဆဲ၊ နောင်လဲရှိလတ္တံ့ပါ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုရောင်ပြန်ဟပ်မဲ့ သင်ရိုးများကို အစိုးရပေါ်လစီနဲ့ညီအောင်ရေးဆွဲရ၊ ကိုးကားရ၊ ပြဌာန်းကြရပါတယ်။ ဒီစည်းစနစ်ဘောင်နဲ့လွတ်တဲ့ တိုင်းပြည်အစိုးရ ကမ္ဘာမှာဒီနေ့အထိမရှိသေးပါဘူး။
ရခိုင်အရေးကိစ္စ အစိုးရက ဖွဲ့ထားတဲ့ကော်မရှင်မှာရှင်ရိုသေလူရိုသေတွေပါတယ်လို့ မှတ်ယူရလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ သတိပြုမိဘို့ကတော့ အစိုးရ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင်က လူမျိုးစုကြီး (၁၃၅) မျိုး ကိုအသေဆုပ်မထားဘူးဆိုတာ ကိုမြင်တတ်အောင်ကြည့်ကြဘို့ လိုပါတယ်။ ဒေါ်စုရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား ရှင်းပြသွားတာကြည့်ကြပါ။ ဘင်္ဂါလီများကိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်လဲမေးတော့၊ လူ့အခွင့်အရေးကိုချိုးဖေါက်တဲ့ အပြုအမူမှန်သမျှကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ကြောင်းရျင်းပြသွားတာကိုကြည့်ပါ။ ဘင်္ဂါလီများကို တရားမ၀င်များပါလို့ပြောသွားတယ်လို့ ယောင်လို့တောင်မကြားမိပါဘူး။ အဲ့ဒီလူမျိုးစု (၁၃၅) ကိုလည်းမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ၊ ပါတီစည်းရုံးရေးဗဟိုကော်မီတီ (အမြုတေပါတီ သက်တမ်းကာလက ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း) သတိပြန်ပြောင်းရကြဘို့လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီမိုကရေစီဗဟိုဦးစီးစနစ် မပေါ်ထွက်ခင်က ရေးဆွဲမြစ်ဖျားခံခဲ့တယ် ဆိုတာကို နားလည်ကြဘို့လိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာမူဝါဒရဲ့ လက်ကိုင်စာတမ်းအဖြစ်၊ တစ်ပါတီစနစ်တုံးက သတ်မှတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလဲ သတိပြုမိကြဘို့လိုပါတယ်။